Mushaharka Ciyaartooyada Kooxda Man.United Sannadka 2015/2016
Mushaharka Ciyaartooyada Kooxda Man.United Sannadka 2015/2016 0 August 04, 2015 in Wararka by Wariye Dalmar Visits: 1014
Waxaa sanadkan sii kor dhay mishaaradka ciyaaryahanada kooxda Manchester United maadama £80 million lagu soo iibiyay 5 ciyaaryahan oo cusub sida (Depay, Darmian,Schweinsteiger iyo Schneiderlin) lakiin kooxdan waxaa ka tagey Van Persie, Falcao i
Waxaa sanadkan sii kor dhay mishaaradka ciyaaryahanada kooxda Manchester United maadama £80 million lagu soo iibiyay 5 ciyaaryahan oo cusub sida (Depay, Darmian,Schweinsteiger iyo Schneiderlin) lakiin kooxdan waxaa ka tagey Van Persie, Falcao iyo Nani. Barnaamijka Ciyaaraha
Hargeysa- (SLL)- Waxaa sanadkan sii kor dhay mishaaradka ciyaaryahanada kooxda Manchester United maadama £80 million lagu soo iibiyay 5 ciyaaryahan oo cusub sida (Depay, Darmian,Schweinsteiger iyo Schneiderlin) lakiin kooxdan waxaa ka tagey Van Persie, Falcao iyo Nani.
Waxaana kooxdan aay noqotay kooxda ugu badan ee ka heleyso sponsar funanadeeda maadama ay xayeysiineyso (Chevrolet) & (Adidas) .
Manchester United waa kooxda ugu badan ee mishaar bixiso horyaalka Ingriiska waxaana ay bixin doonta sanadkiiba £214 million waxaa ku soo xigta Man Citys oo bixin doonto £206.5 million.
Wayne Rooney ayaa ah ninka ugu mishaarka badan horyalka Ingriiska waxaan todobadkiiba uu qataa £300,000, sidoo kale waxaa ku soo xigay Van Persie iyo Rademal Falcaooo kooxda oo iyagu kooxda tagey taasi oo midkiiba uu qadan jiray £250,000 halka Angel Di Maria uu qadan jiray£175,000 todobadkiiba l.
Manchester United musharedkeeda iyo hishiisyada2015-16
(1 Year) 2015
Memphis Depay (New)
xafiiska Hargeysa, Somaliland